आयो सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट,-पानी धुलो केही नछिर्ने?हेर्नुस फिचर्स! | Chautarikhabar
आयो सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट,-पानी धुलो केही नछिर्ने?हेर्नुस फिचर्स!
प्रकाशित मिति: शनिवार, भाद्र १०, २०७४	समय - ९:३८:५७
सामसुङको ग्यालेक्सी नोट एट सार्वजनिक, यी हुन् फिचर्स
बहुप्रतिक्षित ग्यालेक्सी नोट एट फ्याब्लेट सार्वजनिक गसार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एक समारोहमा सामसुङले ग्यालेक्सी नोट एट सार्वजनिक गरेको हो । ग्यालेक्सी नोट सेभेनको कारण सामसुङले गत वर्ष ठुलो मात्रामा क्षति व्यहोरेको थियो। असफलताबाट गत वर्ष गम्भीर क्षति बेहोरेको सामसुङले नोट एटबाट त्यो क्षतिलाई पूर्ति गर्ने र आफ्नो ब्राण्ड इमेजलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
के-के छन् त ग्यालेक्सी नोट एटका फिचर्स ?
परफमेन्स स्पेसिफिकेसनः एन्ड्रोइड ७.१.१ अपरेटिङ सिस्टम रहेको नोट एटमा अक्टाकोर क्वालकोम स्नापड्रागन ८३५ प्रोसेर रहेको छ । यसमा ६ जिबीको र्याम ,इनफिनिटी डिस्प्लेः ६.३ इन्चको एचडी प्लस (२९६० गुणा १४४० पिक्सेल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ । यसको पिक्सेल डेन्सिटी ५२१ पिक्सेल प्रति इन्च रहेको छ ।
आइरिस स्क्यानरसः आँखाको नानी स्क्यान गरेर फोन अनलक्ड हुने सिस्टमलाई सामसङले यस भर्सनमा राखेको छ।यसले प्रयोगचर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेको छ।
फिंगरप्रिन्ट सेन्सरसः आइरिस स्क्यानरका साथै डुअल क्याम सेटअपका साथ फिङ्गरप्रिण्ट फोनको पछाडिको भागमा रहेको छ ।
मेमोरी कार्ड स्लटः यो फोन विभिन्न ३ वटा स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध छ यसको ६४ जिबी, १२८ जिबी र २५६ जिबी गरी तिनवटा मोडेल उपलब्ध हुनेछन् । यसका साथै एक्सटर्नल मेमोरीका लागि छुट्टै मेमोरी कार्ड स्लट पनि हुनेछ । जसबाट स्टोरेजलाई अझै बढाउन सकिनेछ ।
वायरलेस चार्जिङः यसको ३३०० मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्रीले वायरलेस चार्जिङ तथा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ ।
डुअल क्यामरा सेटअपः फ्रण्टमा ८ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा सहित पछाडी 12 मेगापिक्सेलका दुइवटा क्यामेरा छन।
पानी तथा धुलो नछिर्नेः सामसुङको नोट सिरिजको यो सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन पानी तथा धुलो प्रतिरोधी रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ५ फुटसम्म गहिरो पानीमा ३० मिनेटसम्म रहँदा पनि यो फोन र यसको एस पेनमा कुनै असर पर्दैन ।
स्क्रिनसट लिनुहोस् र त्यसमाथि लेख्नुहोस्ः यो फोनमा यदि तपाइँ कुनै स्क्रिनसट लिनुहुन्छ भने आवश्यकता पर्दा त्यो स्क्रिनसट इमेजमाथि केही नोट लेख्न वा त्यसका कुराहरु हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ ।
लाइभ मेसेजिङ फिचरः यो फोनमा लाइभ मेसेजिङ नामको एक गज्जबको फिचर छ । जसको मद्दतले तपाइँले आफैं एनिमेसन वा जिआइएफ बनाएर आफ्नो मनपर्ने मेसेजिङ प्लेटफर्ममा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।
भ्वाइस एसिस्टेन्ट फिचरः यसमा सामसुङको बिक्सबी भ्वाइस एसिस्टेन्ट फिचर रहेको छ ।
रङ तथा मूल्यः यो फोन विभिन्न ४ वटा रङमा उपलब्ध छ । यसको मूल्य अमेरिकामा न्यूनतम ९ सय २९ डलर रहेको छ ।
आगामी सेप्टेम्बर महिनाबाट यो फोन बजारमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकको प्रवक्तामा प्रदिप उदय